WAR HADA AH: Tiknikadii & Ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland oo meel walba harqiyey Iyo Xiisad cusub oo laga soo sheegay deegaanka…. – Puntlandtimes
GAROWE(P-TIMES)- Wararka hada Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helayo magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad ah uu dirayo madaxweynaha maamulka Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi qaybo kamid ah gobolka Sanaag oo haatan ay ka taagan tahay xiisad hor leh oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Saraakiil cusub oo kasoo baxay Kuliyadaha tababarka ciidamada Somaliland iyo kuwo hore uga tirsanaa maamulka Somaliland ayaa ka hawlgali doona deegaano hoostaga deegaanada Jiidali, Awr Boogays, Yubbe iyo qaybo kamid ah gobolkaasi Sanaag.
Magaalada Ceerigaabo oo caasimad u ah gobolka Sanaag ayaa waxaa iyaduna ka taagan kacdoon shacab, waxaana dhinacyada Puntland iyo Jabhadda Caarre ay isku diyaarinayaan dagaal ka dhan ah ciidamada Somaliland oo duulaan ciidan ku qabsaday deegaano dhowr ah oo kamid ah gobolka.
Gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa lagu arkayaa deegaanada Yubbe iyo Badhan oo kawada tirsan gobolka Sanaag, waxaana xiisado dagaal laga dareemayaa deegaanadaasi oo laga yaabo in ay isku fara saaraan ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Isimadda dhaqanka Beesha Warsangeli ayaa inta badan xooga saaraya baajinta dhiig ku daata gobolka iyo deegaanadooda, waxaana kulamo ka dhacay deegaanka Yubbe ay dhex mareen isimadda Beesha Warsangeli iyo saraakiisha ciidamada Somaliland kuwaas oo xooga lagu saarayey sidii ay uga bixi lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag qaybtiisa Bari walowse la sheegay in ay ka dhaga adaykeen arintaasi.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayaa isna koox wasiir iyo xildhibaano ah u diray gobolka Sanaag, waxaana qorshihiisa aanan ku jirin dagaal ka dhan ah Somaliland maadaama aysan jirin ciidamo ka tagay Garowe oo gaadhay deegaanada la isku hor fadhiyo marka laga reebo ciidamo malayshiyaad beeleed ah oo gobolka Sanaag hore ugu sugnaa oo dagaal ku baaqay.
Madaxda dowladda Puntland ayaa weli ku kala aragti duwan jawaab ka bixinta duulaanka Somaliland, waxaana kulan ka dhacay madaxtooyada Puntland oo u dhaxeeyey madaxweyne Denni iyo ku xigeenkiisa la isku af dhaafay arimahani, kaas oo lagu kala kacay ugu dambeyntii.
Puntlandtimes.com kala soco Warar sugan & Xoggo Rasmi ah
Hadaanu nahay shacbiga Somaliland….dooni mayno daadinta dhiiga walaalahayo laakiin hadii ay jabhado nagu hubaynaayaan waa waajib inaan ka horr tagno …..oo gacan birr ah aan kala horr tagno…..aan walaalowno amnigiinu waa. Amnigayaga …..anaguba waan karrnaa inaan jabhado idinku hubayno laakiin ma doonayno amni xunadiina laakiin idinku waad Ku faraxsan tihiin amni xumadayada
Horena umaanan jecLayn dhibaataynta dadkaH walaalahayaga ah ee reer puntland hdana ma rabno lkn puntland mar walba iyaga nagusoi duula jabhado nagu hubeeya na gardaraysta somaliland xad iyo xuduud ayay leedahay waanay sugaysaa xadkeeda cidna marti ugama aha hdaan wada hadal iyo walaalnimo diidana quwad ciidan oo midaysan ayaan ku gaadhaynaa xadkayaga
waa qasab inuu meesha hadhowaato hadheeraato uu dhiig ku daadto waliba dhiig an horey loo arag uu daato waayo somaliland iyadaa wada waxaan oo gobaladeeda ku ekaan weyday qabiil ayaa dowlad noqon kara adeer waa in lais weydiiyaaaakhir in dheeg daato oo laisku baabao ayey tageysaa
Walalyaal waxaa dadka surta isku kilisay etoopiya waana cadowga somalida
aad ayaan uga xumahey hadaan nahey dadka ree somaliland in halkaa dagaal ka curto
lkn ree puntland waa iney jabhadahan ay hubeynayaan ee ay waliba dhulkooda gabaad uga dhigayaan ay ka tanaasulaan waayo marka aad dhulkaaga jabhad u ogolaato adna mucaaridkaagu waxey ku fikiri doonaan iney ka faa’deystaan colaada iyo ficilka aad adigu bilowdey putland waxaan leeyahey waxaan nahey wloo aan marna kala maarmin ee jabhadaha intaad iska deysaan sidii nabad anu ugu wada noolaan laheyn aynu ka talino waayo maanta qof kasta oo somali ah wuu garanayaa sababta ay ethoipa u sameysaneyso ciidan badeed iyadoon bad laheyn waaney iska cadahey in badaha somalida mid ka mida ay u hanqal tageyso,somalidu hadey maanta garan weydo iney midowdo maxaa u diidey iney heshiish is kaashi iyo wax wada qabsi lahaadaan, waxaanan kusoo gabagabeynayaa FAR #KALIYA FOOL MA DHAQDO
Madaxda reer Puntland intay dabakhyo ku iyo Koonfurta Soomaaliya ayay Somaliland hub iyo ciidan dhisanayeen, waana ku saxan within.
Wixii awood yari iyo habacsanaan ah waxaa keenay maamul xumo. Tolow cashar maku qaadan doonaan reer Puntland sida Muuse Biixi u bahdilay.
Asc waxaan aadugaxumhay oigadaaraan Snm omaanta raarqardhoot u hiilinayaan ninkusodulay warasangali waawaxankabasaxnwayay raslbarlamanku haiscasilo iyo Ahmed karash wayo waxaan uarka in cidiba aminsanaan waxay mataalan marka adbaan ugaxumahay madaxwaynah anumantha haysano deni marka ilahy waxaan kabaryaya in sanaag iyo sool caan. Raag dhiglah rabinookano amiin
Dhafoor qiiq dhaqdhaqaaq looma tilmaamo.
Aadbaan uga xumahay dad walaalo ah oo ashahaadanayaa inay dagaalamaan maxaa yeelay ka la dilay iyo ka wax dilay waa naar ayuu rabi yidhi sidaas daraadeed dad walaalo ah,isku diina,isku jinsiyada ,isku afa ayaad yihiin sidaas daradeed dagaal wiilbaa wiil kuma dhasho